बयलगाढामै उपचार गर्न सकिन्थ्यो भने कति मजा हुन्थ्याे ? - EKalopati
बयलगाढामै उपचार गर्न सकिन्थ्यो भने कति मजा हुन्थ्याे ?
गरिबहरूले अस्पतालमा बेड पाउँदैनन् । धनीहरू बेड रिजर्भ गरेर राखिरहेका छन् । बयलगाढामै राखेर गरिबको उपचार गर्न सकिन्थ्यो भने कति मजा हुन्थ्याे हाेला ? बयलगाढामा बसेका बिरामीकै ठाउँमा डाक्टर आउँथे उपचार गर्थे काइदा हुँदैनथ्यो र ? मजदुर, साना तथा खुद्रा व्यावसाय गर्ने, होटल रेष्टुराँमा काम गर्नेहरू भोकले छटपाटाए पनि सरकारलाई भने संसदकाे अंकगणिबाट फुर्सद छैन । शहर बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि धेरै मजदुर झिटीगुण्टा बोकेर आ–आफ्नो गाउँमा लागिसकेका छन् । उनीहरूका लागि शहरमा खाने र बस्ने आधार नै सकिएपछि मजदुर सहरमा बसून् पनि कसरी ? सहयोगका लागि कुनै सहारा नै नभएपछि महामारीमा सबैभन्दा ठूलो मारमा मजदुरहरू छन् ।
अन्य राम्रा पेशामा भएका, सरकारी रोजगारी, सबल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कामदारले खान र बस्नकै निम्ति अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको छैन । खानका निम्ति पनि समस्या छैन । अस्पताल, औषधिको व्यापार गर्नेलाई फाइदा नै पुगेको छ । समाजका उच्च वर्गका व्यक्तिलाई महामारीमा पनि स्वाथ्यको पहुँच छ । कोभिड–१९ यो दोस्रो लहरमा पहुँचवालाले घरमै अक्सिजन जोहो गरेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । उनीहरुले लागि निजी अस्पतालले शय्या (बेड) सुरक्षित गरेर राखेका छन् ।
महामारीका बेला धनी वर्गका कयौँले अस्पतालको बेड नै बुकिङ गराएको अवस्था छ । तर, गरिबले न आफ्नो ज्यान बचाउने प्राणवायु पाउने अवस्था छ न त अस्पतालको बेड नै । वयलगाढामा उपचार सम्भव हुने भए सायद गरिबले उपचार पाउँथे । बल्लतल्ल बेड पाइहाले पनि खर्चले धान्न सक्ने अवस्था छैन । मजदुरलाई दैनिक गुजारा गर्न मुस्किल छ । निम्न वर्गका मजदुरलाई बिहान–बेलुका खान र बस्नकै विकराल समस्या छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइहाले उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन, काम गर्ने मजदुरले खोप लगाउनसमेत पाएका छैनन् । दैनिक तलब पाउन नसकेपछि शहरमा घरभाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । घरबेटीले छुट दिँदैनन् । कयौँलाई आफ्नो गाउँको घर जान सक्ने अवस्था छैन । काठमाडौँ उपत्यका नजिकका जिल्लाबाट शहरमा मजदुरी गर्न आएकाहरू रातारात घर पुगेका छन् । यस्ताे चुनाैतीका बेला सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू विवादै विवादको कचिङ्गलमा फसेका छन् । मजदुरको उपचारको प्रश्न त परको भयाे । त्यसैले भन्न मन लाग्छ कास बयलगाढामै उपाचार पाइन्थ्याे भने ?
Previous articleखोपको पहल भइरहेको आलेटाले गफ चुट्नमै व्यस्त छ सरकार
Next articleराजनैतिक दाैडधुपको कारण के ?